06/22/13 ~ MOBILE IT NEW
Mobile IT New ဆိုက်လေးကို ဖုန်းကနေဖတ်ချင်သူများအတွက် Mobile IT New APK
11:59 PM Android Application No comments
Mobile IT New ဆိုက်လေး ကို ဖုန်းကနေဖတ်ချင်သူများအတွက် apk လေးထုတ်ထားပေးပါတယ်
အားလုံးအဆင်ပြေအောင် Mobile IT New ဆိုက်နဲ့ Facebook Page အတွက်2ခုလုပ်ထားပါတယ်
အခု လုပ်ထားတဲ့ apk ကတော့ Online အတွက်ပဲရမှာပါ internet ဖွင့်ထားမှသာ သုံးလို့ရမှာပါ
Online ရော Offline ရော ၂ မျိုးလုံးသုံးနိုင်တဲ့ apk တော့ ပီမှ ပြန်တင်ပေးပါမယ်။
Mobile IT New ဆိုက်အတွက်က ဒီမှာဒေါင်းပါ >>> download
Facebook Page အတွက်ကဒီမှာဒေါင်းပါ >>> download
ကလစ် ၂ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ ဖူးဖြစ်တဲ့ IDM 6.15 BUILD 14 ပါ
11:25 PM internet No comments
ဟော လာပါပြီ ခင်ဗျာ ကလစ် ၂ချက် နှိပ်ရုံနဲ့ full version ဖြစ်မယ်
IDM လေးပါ။ ဒီတခါတော့ ရက် နဲနဲကြာအောင် ခွဲပြီးမှာ ဒါလေးကို release လုပ်ထားတယ်
အားလုံး သိပြီးတဲ့ အတိုင်းပဲ နော် JUST DOUBLE CLICK
MEGA | ZIPPYSHARE | BOX | TUSFILES | SENDSPACE
Sony ဖုန်းများတွင် externel မန်မိုရီိကို Internel မန်မိုရီအဖြစ်ပြောင်းလဲနည်း
9:09 PM နည်းပညာများ No comments
Application Games များ Data များ..များများထည့်သွင်းနိုင်ရန်
ကျတော်..အသစ်အစမ်းလေးမတင်တာကြာတော့ ဒီတစ်ခါ တစ်ခုလောက်တင်ပေးမယ်နော်..အခု
တင်ပေးမှာပါ Sony ဖုန်းတွေမှာ Internel မန်မိုရီနဲတဲ့ ပြဿာနာကို ဖြေရှင်းနည်းလေးပါ..ကျတော်ကိုတိုင် စမ်းထားတာပါ..သိပြီးသားသူတွေရှိနေရင်လဲ..ခွင့်လွတ်ပါဗျာ..ကဲ့.ပြောကြည်မယ်နော်..
sony ဖုန်းတွေမှာ Internel မန်မိုရီနည်းနေတဲ့သူများ..အတွက် Externel မန်မိုရီကို Internel မန်မိုရီအဖြစ်ပြောင်းလဲ..အသုံးပြုနည်းလေးပါ လုပ်ရမှာ..လွယ်..
မပြောင်းလဲခင်မှာ မိမိဖုန်းဟာ Root ဖောက်ထားရပါ့မယ်.. Root Explorer ရှိပါ့မယ်..
8:52 PM နည်းပညာများ No comments
8:43 PM ဗဟုသုတများ No comments
* Turbo Mode (အသုံးမပြုလျှင် Core ကို အလိုအလျောက် ရပ်နားပေး)
* Hyper-Threading (processor resources ကိုကောင်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်)
* 32-45 nm Silicon (စွမ်းအင် အသုံးချမှုနည်းပြီး အပူချိန်လျော့)
8:37 PM ဗဟုသုတများ No comments
4shared ဆိုတာဘာလဲ ?
8:14 PM internet No comments
မသိတဲ့သူတွေအတွက် ကျွန်တော် သိတာလေး ပြန်မျှဝေတာပါ။ 4shared ဆိုတာ online storage ကြီးတစ်ခုပါ။ အဲ့ဒီမှာ အမျိုးမျိုးသော files, softwares, applications, photos စတာတွေကို နိုင်ငံအသီးသီးကနေ လူမျိုးများစွာ တင်ထားကြပါတယ်။ တင်ထားသမျှတွေကို
ပြန်လည်မျှဝေထားရင် အားလုံးကို အလွယ်တကူ ကိုယ့်ဘက်ကနေ download ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တင်တာကိုလဲ သူများတွေက ပြန်ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အပြန်အလှန် မျှဝေကြရင်း 4shared online storage ကြီးက စည်ကားလို့နေပါတယ်။ တစ်နည်းပြောရရင် အခမဲ့ မျှဝေတဲ့ online အလှူအိမ်ကြီးပေါ့ဗျာ။
8:08 PM Myanmar Font များ No comments
ကျွန်တော် ဒီ Toolkit လေးကို ရေးမမယ်ရေးမယ် နဲ့ အခုမှ တကယ်ရေးဖြစ်သွာားတယ်ပေါ့ဗျာ.
သူက ဘာတွေ အသုံးဝင်လဲဆိုတော့ Root ရှိပြီးသား ဖုန်းတွေ အတွက် မြန်မာဖောင့်ထည့်တာတွေ
Root မလုပ်ပဲ နဲ့Samsung ဖုန်းထဲကို မြန်မာဖောင့်ထည့်တာတွေ
CWM recovery ရှိတဲ့ဖုန်းကို Root နဲ့ မြန်မာဖောင့်ထည့်တာတွေ
ပြီးတော့ ကျွန်တော် တို့dload နဲ့ ကျော် ထားတဲ့ ဘယ်ဖုန်းမဆို Root နှင့် မြန်မာဖောင့် ထည့်သွင်းပေးတာတွေ
Goolge Application သွင်းတာတွေ .. အစ ရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်
9:49 AM internet No comments
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ၁ရက်နေ့ က တင်ပေးထားတဲ့ အလွယ်ကူဆုံး wifi password ရယူနည်းက April Fools လုပ်ထားခြင်းဖြစ်တာကို ပထမဦးဆုံး ဝန်ခံပါရစေ။ အဲ့ဒီတုန်းက စာနဲ့ အတူ တွဲလျှက်ပါတဲ့ ပုံတွေကတော့ Realtex Wifi Adapter အတွက် သီးသန့် သုံးတဲ့ CDLinux Chinese Version Software ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု အတည်ပေးမယ့် Software ကတော့ wireless adapter အားလုံးနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Beini Software English Version ပဲဖြစ်ပါတယ်။
. Beini Software ကိုသုံးပြီး minidwep-gtk program ဖြင့် wifi password ရယူခြင်းကို တင်ပြချင်ပါတယ်။ ဆော့ဝဲလ်ကို မဒေါင်းခင် ပထမဦးဆုံး လိုအပ်တာကတော့ CD အလွတ်တစ်ချပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှိပြီဆိုလျှင် Beini Software ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ ။ ဒေါင်းပီးရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း zip ကို ဖြည်လိုက်ပါ။ ဖြည်တဲ့အခါ ပြန်ရှာရ လွယ်ကူအောင် Desktop ပေါ်မှာ ဖြည်စေချင်ပါတယ်။
6:10 AM ဗဟုသုတများ No comments
စမတ်ဖုန်းတွေဟာ အခုဆို ပေါပေါလောလော ရနိုင်နေပါပြီ။ မကြာမီ Service Provider ၂ခုကို ဇွန်လ ကုန်ပိုင်းမှာ ထပ်မံရွေးခြယ်ဦးမှာပါ။ အခု ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူ အရေအတွက် ဟာ တိုင်းပြည်လူဦးရေရဲ့ ၁၀ % အောက်မှာ ရှိနေပါတယ်။ အခု ကုမ္ပဏီကြီးတွေကတော့ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရင် မိုဘိုင်းကွန်ယက် တွေ ကျယ်ပြန့်လာအောင် လုပ်ပေးပြီး မြို့ပြ ကျေးလက်မကျန် လူတိုင်းကိုင်နိုင်အောင် လုပ်ပေးမှာပါတဲ့။ ဟုတ်ပါပြီ။ ဖုန်းတွေများလာပါပြီတဲ့။ ဟန်းဆက် အသုံးပြုမှုလည်း တစ်ခါတည်းတက်လာမှာပါ။
မိတ်ဆွေတို့ ဘာဟန်းဆက် သုံးသုံး ကြုံတွေ့ရမယ့် အချက်ကတော့ ဘက်ထရီ ကိစ္စပါ။ ကျွန်တော်လည်း မကြာခဏ ကြုံဖူးပါတယ်။ တကယ် အသုံးလိုရင် ဖုန်းဘက်ထရီ ကုန်နေတတ်တာမျိူးပေါ့။ အင်တာနက် ရေလည်သုံးတဲ့သူ၊ ဂိမ်းအရမ်းဆော့တဲ့သူတွေဆို ပိုခံစားမိမှာပါ။ ကဲဗျာ နိဒါန်းပျိူးနေတာ ကြာပါတယ်။ ဘက်ထရီ အကုန်သက်သာအောင် ဘာတွေ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ကြည့်ရအောင်။
6:03 AM computer Software No comments
Safe Mode ကနေဖွင့်ကြည့်ချင်လား..USB Stick အတွင်း Virus ကိုက်သွားလို့ သုံးမရ..ဖွင့်မရ..ပျက်သွား
ပျောက်သွားတဲ့ဖိုင်တွေကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ် Repair လုပ်ချင်လား...စတဲ့ စတဲ့ USB နဲ့ပတ်သက်ရင်
Computer ထဲက ဖိုင်တွေကိုသူများမကြည့်၊ကူးလိုဖျက်လို့ မရအောင်လုပ်နည်း
5:38 AM computer Software No comments
ဒီနည်းကတော့ ဖိုင်တွေကို သူများမကြည့် ၊ကော်ပီကူးမရအောင် ၊ ဖျက်မရအောင်
လုပ်တဲ့ဆော့ဝဲပါ အပြည့်အ၀ သုံးလို့ ရတာမလို့အလကားနဲ့ နှိုင်းစာလိုက်ရင် ဒါက
ပိုပြီးကောင်းတယ် ။လုပ်နည်းကလည်း အများကြီးရှိတာ ဆော့ဝဲမပါလည်း လုပ်လို့ 
ရတယ် ဒါပေမယ့် ဆော့ဝဲနဲ့ ချထားတဲ့ ဖိုင်တွေကိုတော့ ဖြတ်ကျော်ဖို့ အတော်လေး
ခက်ခဲပါတယ် မရဘူးလို့ တော့ မဆိုလိုဘူး နည်းပညာက တိုးတက်နေတော့လည်း
Android Phone အမျိုးအစား 2000 ကျော်ကို Root လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Vroot update v1.4.1
4:55 AM Android Root Tool No comments
Android Phone အမျိုးအစား 2000 ကျော်ကို Root လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Vroot update v1.4.1 လေးပါ
One Click Root လေးမို့ သုံးရတာ လဲ လွယ်ကူပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေအောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် နော်။ လိုချင်သူများအောက်မှာဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။။။။
Mobile IT New ဆိုက်လေးကို ဖုန်းကနေဖတ်ချင်သူများအတွ...
Sony ဖုန်းများတွင် externel မန်မိုရီိကို Internel ...
Android Phone အမျိုးအစား 2000 ကျော်ကို Root လုပ်ပေ...